Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Quincy na-ekwe nkwa Akụkọ Childmụaka Gụnyere Eziokwu Ha Na-adịghị Eke Ndụ
Akụkọ ndụ anyị nke Quincy Promes na -akọ akụkọ gbasara akụkọ nwata ya, ndụ nwata, ezinaụlọ, nne na nna, nwunye, ụmụaka, ụzọ ndụ, ndụ onwe onye, ​​na ihe kwesịrị ekwesị.
N'okwu ezi uche, anyị na -ewetara gị njem onye egwuregwu bọọlụ site na mmalite ya, ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji kpalie agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị, nke a bụ ebe ihe ndina ya na ebe ịrị elu ya - nchịkọta zuru oke nke Quincy Promes 'Bio.
Ndụ mbido na ịrị elu nke ego Wolf.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ nwere onyinye nke ukwuu na anya maka ọsọ na ihe mgbaru ọsọ.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole n'ime ndị egwuregwu bọọlụ na -atụle Quincy Promes Biography, nke nwere akụkọ gbasara ya E jidere kpakpando Ajax na nnukwu nsogbu. Ugbu a, na-ebughị ụzọ, ka anyị bido.
Quincy na-ekwe nkwa Childhoodmụaka Akụkọ:
Maka ndị mbido Biography, ọ na -ebu aha otutu "Ego Wolf." A mụrụ Quincy Anton Promes n'ụbọchị 4th nke Jenụwarị 1992 nne ya (onye na-elekọta ụlọ) na nna (onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ) n'obodo Amsterdam, Netherlands.
Ọ bịara n'ụwa otu n'ime ụmụ nwoke abụọ amụrụ site na ọmarịcha nne na nna Surinamese hụrụ ebe a.
Nzute Quincy kwere ndị nne na nna nkwa.
Agbanyeghị na amụrụ na Netherlands, Quincy Promes sitere na ezinụlọ ya sitere na Suriname, mba South America na ebe mbụ Netherlands na -achị.
IHE: Nke a bụ obodo -ndị egwuregwu bọọlụ na -esote; Denzel Dumfries, Clarence Seedorf, Edgar Davids, Nke Jana-Hoever, na Jimmy Floyd Hasselbaink si.
Quincy kwere nkwa ezinụlọ:
Ndị mụrụ ya na mgbakwunye na ọtụtụ ezinụlọ Suriname so na ndị kwagara Netherlands na mmalite 1990s n'ihi ọnọdụ akụ na ụba siri ike na mba South America.
Ọzọkwa mara, tọ bụ ndị Suriname nwere ezinụlọ sitere na Sub-Saharan Africa nke ọtụtụ n'ime ha bụ ndị agbụrụ West Africa. Lee n'okpuru map nke na-enyere aka ịkọwapụta Quincy Nkwa Ezinaụlọ.
Quincy kwere nkwa mgbọrọgwụ ezinụlọ.
Qunicy Promes toro na nwanne ya nwoke amaghi ihe banyere Amsterdam, Netherland. O sighị na nzụlite ezinụlọ bara ọgaranya.
N'ezie, nne na nna ya dị ka ndị ọzọ na-akwaga n'obodo ahụ na-arụ ọrụ dị ala ma ghara inwe agụmakwụkwọ kacha mma maka ezigbo ọrụ ọcha.
Mgbe ọ bụ nwata, Promes enweghị mmasị na nchịkọta ụmụaka kachasị ọhụrụ dịka onyinye sitere na nne na nna ya, naanị bọọlụ nke afọ juru ya.
Quincy Promes malitere ịkụ bọl site na mgbe ọ nwere ike ịga ije.
Quincy na-ekwe nkwa agụmakwụkwọ na ịrụ ọrụ:
Dabere na nyocha, afọ kacha mma iji nweta agụmakwụkwọ football bụ site na 6 ruo 10. Maka Nkwa, ọ malitere ozugbo site na ya nwere ike ịga ije, ekele niile maka nna ya nke gbara mbọ ịnọgide na -ebi nrọ nrọ ya site n'aka nwa ya nwoke.
Nkwa nna bụbu onye egwuregwu bọọlụ amateur na Suriname tupu ọ kwaga Netherlands. N'inwe onye hụrụ football n'anya maka nna, ọ dịịrị Promes n'anya ịhụ egwuregwu mara mma.
Qunicy Promes Mama adịghị mma na bọlbụ ya: Iji gaa n'ihu na -arọ nrọ nna ya na -agba bọl, Promes kwenyere na nna ya na mbụ, na ọ ga -abụ onye egwuregwu bọọlụ.
O nwere oke ịnụ ọkụ n'obi na ebumnuche ịbụ onye pro, ihe ngosi nke hụrụ ya ka ọ na-egwu bọọlụ n'ụtụtụ, n'ehihie, na mgbede.
Mmepe a adabaghị nne ya nke na -eche banyere obere Promes ya na -agụghị akwụkwọ nke ọma, na -anọ ọdụ n'oge na -echetaghị ime ihe omume ụlọ ya na ọrụ ụlọ.
N'ihi nke a, nne ya ga -agbarịrị Nkwa mgbe ụfọdụ. Ịnabata ya n'ime ụlọ akwụsịghị ọchịchọ ya ịghọ pro.
Afọ ndị mbụ nke Quincy Promes.
Quincy na -ekwe nkwa akụkọ ndụ - Oge Ndụ Ahụike:
Ọ joyụ na -egosipụta ndị ezinụlọ ya gụnyere nne ya nke nwere obi abụọ na mbụ maka ọrụ ya enweghị oke mgbe Promes gafere ule Ajax wee debanye aha ya na klọb obodo ya.
Mgbe ọ nọ na agụmakwụkwọ, Promes na -efe arụsị Ronaldinho. Agbanyeghị, nna ya nọgidere bụrụ onye nlereanya kachasị mkpa ya, onye ya na ya nọ n'afọ ndụ ya niile na Ajax.
Quincy na-ekwe nkwa ndụ mbido na bọọlụ.
Dị ka Quincy Nkwa dị iche iche gara n'ihu na -eto, ọ hụrụ na ya na Academy na -ebi ndụ nke ọma.
Ọ bụ ya ụdị nwatakịrị na - apụ apụ - ụdị onye ndu nke duziri ọrụ ndị otu ya. N'okpuru ebe a bụ mpempe vidiyo vidiyo nke nwa nwoke nwere obi ike ka ọ na-arụ ọrụ iduzi ya na Ajax TV.
Quincy kwere nkwa Biography- tozọ a ma ama Akụkọ:
Mgbe Oge Na-aga Siri Ike: N'oge ọ dị afọ 16, Nkwekọrịta Quincy 'malitere itinye aka na njikwa klọb.
Ajax boro ya ebubo na o gosipụtara omume ojoo, ihe mmepe nke mere ka o nweta ulo akwukwo mmuta ya nọrọ na klọb.
N'ụzọ dị mwute, na afọ 2008 (ka dị afọ 16), Nkwekorita nke Promes na Ajax kwụsịrị ma gwa ya ka ọ pụọ na klọb n'ihi ihe a na-akpọ "Àgwà Ọjọọ".
Fọrọ nke nta Kwụsị Bọọlụ: Ịjụ Ajax kpatara nnukwu ihe mgbu nke na Promes chere na ịkwụsị ịgba bọọlụ.
O were mgbalị nne na nna ya (tumadi nne ya) ime ka o laghachi n’egwuregwu bọọlụ, mee ka ọ ghọta- Onye nkuzi kacha mma bu enweghi uche.
Nkwa na -adịghị anya chọpụtara na ọ dị mma ịmehie ihe nke a nyekwaara ya aka itolite wee bụrụ ezigbo mmadụ.
akpụ akpụ On: Nkwa nwere klọb ọzọ- HFC Haarlem ebe ọ na-egwuri egwu otu afọ tupu klọb ahụ apụ.
Tupu mmefu ego, ọ chọrọ ụzọ mgbapụ site na ịga ule na FC Twente onye nyere ya ohere isonye na agụmakwụkwọ ha.
FC Twente gosipụtara na ọ bụ nzọụkwụ kwesịrị ekwesị maka ya ka ọ na -enweta ngụsị akwụkwọ agụmakwụkwọ na ịkpọtụrụ ndị otu idobere. Ịmụta site n'oge gara aga, Nkwa dị iche iche malitere igosi oke ntozu oke na ma n'ọhịa.
N'otu oge ahụ, omume ntozu ya mere ka ọ nweta onye isi Jong Jong Twente site na akụkọ akụkọ na onye nchịkwa Dutch, Patrick Kluivert.
O mechara nwee ọganihu na mbinye ego ya na klọb Dutch akpọrọ 'Gaa n'ihu Eagles'ebe o zutere Erik ten Hag wee bụrụ onye ọkpụkpọ ya kacha mma.
Amaghị na Promes amaghị na iguzosi ike n'ihe ya ga -eme Erik ten Hag (onye nkuzi Ajax n’ọhụụ) ga - abụ nwoke ahụ iji mee ka ọ laghachi Ajax, klọb nrọ ya.
Ego Wolf na Erik ten Hag rụkọrọ ọrụ ọnụ n'otu oge na Go Ahead Eagles.
Nnukwu Mkpebi ahụ: N'agbanyeghị ihe ntozu okè, Promes kpebisiri ike igwu egwu nke ọma, nweta onyinye ka mma na mkparịta ụka maka nnukwu ego. Nrọ na nnukwu, ndị otu ya ga-egwu egwu, na-akpọ ya "Wolf Ego".
Mgbe ọ gbasịrị ihe mgbaru ọsọ 11 maka FC Twente na 13 ọzọ maka ịgbazinye ego Gaanụ n’egwuregwu bọọlụ, Ihe omume nke Promes malitere ịdọrọ ọtụtụ klọb ndị Europe.
Quincy na-ekwe nkwa Bio - Bilie na-ewu ewu Akụkọ nke:
Ihe ndị mara mma malitere ịbịakwute ya. Nke mbu, Promes nwetara oku sitere na ndị otu mba Dutch. Nke abuo, mkparịta ụka ya na Spartak Moscow na-akpalite nnukwu ego dịka ọ na-arọbu na mbụ.
Ọtụtụ ndị jụrụ ajụjụ nhọrọ Promes maka Russia ha nụrụ kepu kepu EGO bụ Mba: ihe 1 maka ya ma ọ bụghị Football. Nke a hụrụ ya ka ọ na-azọrọ aha yaWolf Ego".
Ndụ Russia: Nkwa ndị a hapụrụ na Russia mgbe ọ dị obere, na -enwe uche nke igosi na ndị nkatọ ya ezighi ezi. Mgbe ọ nọ na Russia, o kwuru nkwupụta banyere akụnụba ya tupu arụ ọrụ ubi.
Banyere igosipụta akụ na ụba ya, Promes mere vidiyo ebe o gosipụtara uwe dị oke ọnụ, ihe ndị ọ zụtara na ego yana mgbakwunye mgbasa ozi n'ụlọ penthouse ya.
Nke a wulitere obi abụọ n'ime ndị na -akwado ya ma Promes nwere ike ijikwa ndụ dịka onye egwuregwu bọọlụ. Mgbe ụfọdụ echiche gbasara akparamagwa ya na -alọta ịchụ nta ya, Promes kpebiri ihichapụ vidiyo niile, laghachi na -elekwasị anya n'ọrụ ya.
Nkwa nwere ezigbo mmalite na ọrụ Russia ya ka ọ tụpụtara ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ wee nye ọtụtụ enyemaka dị mma.
Nwa nwoke pacy nwere nka nke tozuru oke ghọrọ onye ọkpụkpọ kacha nwee ọfụma na elu ụgbọ elu Russia ka ọ meriri ọtụtụ onye ọkpụkpọ otu nke ọnwa.
N'ịda ndị nkatọ ya ọnụ, Promes gara n'ihu bụrụ onye kacha nwee akara mgbaru ọsọ na otu egwuregwu. Ihe mgbaru ọsọ ya nyeere Spartak Moscow aka inweta asọmpi Premier Russia (2016-2017), Russian Super Cup (2017), na onye ọkpụkpọ oge abụọ nke nturu ugo afọ.
Ntughari Dutch nke Bilie Akụkọ - O meriri ihe ọ bụla a ga-emeri na Russia.
Kama crumrum, onye ọka egwuregwu ahụ toro site na ike ruo ike, na -aga n'ihu Sevilla na Ajax mechara, ebe ọ kwụghachila ụgwọ ya.
N'oge edere, Quincy Nkwa dị ugbu a n'etiti enweghị akara na-adịghị agwụ agwụ nke ndị na-agba ọsọ ụkwụ dị ịtụnanya bụ ndị na-emegharị Dutch football mgbe mba 2018 World Cup iru eru ọdịda. Ndị nke ọzọ, dịka ha na-ekwu, bụzi Akụkọ mgbe ochie.
Banyere Quincy na-ekwe nwunye na Childrenmụaka:
Site na ya Bilie na ama na football, ọ bụ ihe doro anya na ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ, ọkachasị ndị na-achọ ụmụ nwanyị ga-enwerịrịrịrị iche ma Quincy Nkwa nwere enyi nwanyị ma ọ bụ na ọ lụbeghị nwanyị.
Isnye bụ Quincy Promes Girlfriend? He Ọ ka na-alụbeghị di ma na-achọ?…
Enweghị agọnarị eziokwu ahụ bụ na ịma mma Quincy Promes mara mma, ntozu oke, yana nsọpụrụ ọrụ ya agaghị eme ya ezigbo enyi nwoke na di (nke dị ugbu a n'oge edere).
N'azụ onye egwuregwu bọọlụ na -aga nke ọma, enwere nwunye mara mma. Nkwa na-alụrụ nwunye ya (foto dị n'okpuru) yana ọnụ, ha nwere ụmụaka atọ- ụmụ nwanyị abụọ na otu nwoke.
A mụrụ nwa ha nke atọ, aha ya bụ Noakin na 8 May 2017, obere oge ka akwadochara Spartak Moscow ka ọ bụrụ onye mmeri egwuregwu.
You maara?… Nwunye Quincy Promes mụrụ nwa ya nwoke na nwa ya nke atọ (Noaquin Given Promes) na 8th nke May 2017. Onye òtù ezinụlọ ọhụrụ a bịara mgbe Spartak Moscow na-emeri mmeri nke mmeri.
Dịka akparamagwa ndị mbụ ya, alụmdi na nwunye Quincy nwere ọgbaghara n'oge na -adịbeghị anya.
N'otu oge, a kpọbatara Nkwupụta nyocha nke anya ọha mgbe ejidere ya maka iti nwunye ya ihe na June 2018. Ọ ewepụtara ya na mgbapụta, ka nyocha ahụ gara n'ihu.
Quincy na -ekwe nkwa ndụ nkeonwe:
Knowmata Quincy na-ekwe nkwa ndụ onwe onye n'ọdụ egwuregwu ga-enyere gị aka ịmata ụdị onye ọ bụ.
Na-egwu egwu, O na-ekwe ezigbo enyi ezigbo oge. Memphis Deplay. Agbanyeghị na ha na -egwu egwu na mba abụọ dị iche iche (n'oge edere), ha abụọ na -akparịta ụka kwa ụbọchị.
UGBU A, Olee ihe jikọrọ ha abụọ?… Azịza ya bụ Egwú na Egbugbu.
Ịmata ndụ onwe ya nke Pitch.
Ị maara?… Nkwa otu wepụtara otu ngwa ngwa rapa na-adịbeghị anya ya na onye otu mba ụwa Memphis Deplay.
Yiri akwa ọla edo dị oke ọnụ, vidiyo rap ha bidoro site na mmadụ abụọ ahụ nọdụ ma na -achị ọchị na Rolls Royce dị oke ọnụ tupu ha etinye ọla ha n'elu ụgbọ ala.
Depf Depad na Memphis bidoro ịma mma tupu ọtụtụ mmadụ ewee ya nkwa dị mma n’aka ezigbo enyi ya. N'okpuru ebe a bụ mpempe akaebe- Vidio ahụ.
Yabụ na Quincy na-ekwe nkwa ndụ nke ya, o nwere ọdịdị eke maka Russia- mba kachasị n'ụwa nke mere ka ọ nweta ọrụ ya kacha mma.
N'oge oyi, Promes ahụla obodo kpuchiri mkpuchi snow na -acha ọcha, na -eme ka nlele niile bụrụ ihe pụrụ iche na pụrụ iche. N'ebe ndị ọzọ eke, ọ gara, ihu igwe snow (dika ahuru n’okpuru) na - enchanting n'ezie - naanị ihe ọzọ mere o jiri hụ Russia n'anya.
Eziokwu ndụ nke onwe onye pụọ na football- Echiche ya na ahụmịhe ya na Russia.
N'ikpeazụ bụ nkwenye onwe ya na ndị na -akwado egwuregwu bọọlụ Russia abụghị ịkpa oke agbụrụ. Ezinaụlọ Quincy kwere nkwa nwetara ihe kacha mma na Russia n'oge ọnụnọ ha niile, mgbe ọ na -egwu Spartak Moscow.
Onye egwuregwu bọọlụ ahụ, nne na nna ya ahụghị ịkpa ókè agbụrụ n'agbanyeghị nkwenye a ma ama na ịkpa ókè agbụrụ bụ ihe okike na mpaghara.
Promin Quincy Web:
Eziokwu ga-enyere gị aka ịma ụdị ndụ ọ ga-enyere gị aka ịghọta nke ọma banyere ibi ndụ ya. Mị nweta ọtụtụ ego site na bọọlụ gbagafere ụdị ndụ obibi dị mfe nke onye flashy ụgbọ ala Mercedes sere n'okpuru.
Quincy na-ekwe nkwa LifeStyle- Ọ na-anya ụgbọ ala mara mma.
Ọzọkwa na ndụ, ikpebi n'etiti ịdị mma na ihe ụtọ abụghị ugbu a nhọrọ siri ike maka Nkwa.
Ọ bụghị naanị na amaara onye egwuregwu bọọlụ na-ama mma mgbe niile maka ọmarịcha egwuregwu ya mana ikike ịzụta elekere dị oke ọnụ na ibi ndụ nrọ ya nke oke osimiri.
Quincy na-ekwe nkwa LifeStyle- Ajụjụ banyere ihe ọ na-emefu ego ya.
Quincy kwere nkwa ndụ ezinụlọ:
Mmepe nke ndị egwuregwu bọọlụ dịka nwata ọ bụla chọrọ enyemaka nke ndị otu ezinụlọ, ọkachasị nne na nna, nne na nna Quincy Promes guzoro ya, na -enyere ha aka iru ebe ọ nọ taa.
Nkwa n'oge edere ya na nwunye ya, ụmụ ha atọ, nne na nna ya, na nwanne ya nwoke.
N'ịbụ ndị jikọtara ọnụ na obodo Dutch, ndị ezinụlọ ya na -aghọrọ mkpụrụ nke inwe nke ha (onye na-eme ihe achịcha) na -etinye akụkụ nke ezinụlọ ya maka nnwere onwe ego, ekele niile maka ọrụ ịgba bọọlụ na -aga nke ọma.
Nkwanne ya bụ onye ọkpụkpụ azụ ya na onye mere ya kacha nwee ike ịlaghachi na football mgbe Ajax chụpụrụ ya.
Quincy Promes yiri ka ọ dị nso na nne ya karịa nna ya.
Quincy na-ekwe nkwa eziokwu:
Eziokwu nke 1: Ejidere ya ka ọ gbuo onye otu ezinụlọ:
N'etiti etiti Disemba nke 2020, akụkọ dara gbasara onye egwuregwu bọọlụ na -eme ihe a na -atụghị anya ya. Dabere na Telegraaf, ejidere Qunicy Promes maka ịtụgburu onye otu ezinụlọ.
Ihe a eboro ebubo mere mgbe ezinụlọ na -ezukọ n'ụlọ nkwakọba ihe ya na Abcoude, na mpụga Amsterdam.
Mgbe esemokwu kpụ ọkụ n'ọnụ na ụlọ nkwakọba ihe, a na-ekwu na Promes jiri mma gbuo onye ahụ, na-akpata nnukwu mmerụ ahụ. Ntinye aka nke ndị otu ezinụlọ kwere nkwa na mmerụ ahụ onye ahụ merụrụ ahụ esighi njọ.
Ihe omume mkparị Qunicy na -eme na July 2020, amabeghị ihe kpatara onye otu ezinụlọ ji kọọ akụkọ ahụ na njedebe 2020. Onye egwuregwu bọọlụ Dutch nwere ike ịnọ n'ụlọ mkpọrọ afọ anọ ma ọ bụrụ na achọpụtara ya na ikpe mara.
Eziokwu # 2: Buszọ Shokwụ Na-eji Anụmanụ Mee:
Njikọ mmekọrịta a n'etiti bọọlụ na ihe anyị nwere ike ịkpọ 'rapping' adịla ogologo oge Quincy Promes na -akwalite egwuregwu ya n'oge na -adịbeghị anya.
Mgbe ọ gbasasịrị na ọnọdụ hip-hop, ụdị onye ọ na-eme na ntụrụndụ ahụla ka ọ na-eso ụfọdụ ndị ama ama na ụlọ ọrụ dịka Busta Rhymes.
Quincy Na-ekwe nkwa Rahụ Maka Ahụhụ hụrụ ya ka ya na Busta Rhymes na-ete ubu.
Obi abụọ adịghị ya, Nkwa Quincy bụ ihe mkpali nye ndepụta na-eto eto nke ndị egwuregwu ịgba egwu egwuregwu kachasị elu site n'oge gara aga na ugbu a.
Eziokwu nke 3: AZ nke Quincy Promes 'Tattoos:
N'inwe ego niile na -abịa na ya bụ onye ama ama n'ụwa niile, Quincy Promes anaghị egbu oge itufu ahụ ya na egbugbu.
O nwere ọtụtụ egbugbu- n'azụ ya ka egbugbu 'Pharoah onye Ijipt“. N'akụkụ ihu ya nwere ụdị edemede igbu egbugbu na -egosipụta ndụ ya gara aga.
Ingghọta Quincy na-ekwe nkwa igbu egbugbu- Azụ na azụ ya.
N'etiti ya niile Quincy Promes tattoos, ihe osise kachasị na-adọrọ adọrọ bụ nke na-anọchite anya aha ya, edepụtara nke ọma dị ka 'QP' ma guzoro n’azụ isi ya.
Quincy Na-ekwe Egbugbu- Isi Ya na Nchịkọta Aka.
Eziokwu nke 4: Nzukọ Pele:
O nwere mmekorita ya na Legend nke Brazil, Pele- Mgbe ọ bụ nwatakịrị, ndị nne na nna Quincy Promes nyeere nwa ha aka ịbanye na Ajax bụ onye nyekwara ya ohere izute Eze nke Football- “Pele".
Quincy Promes zutere Pele ozugbo.
Tupu inwe ihu na Legend nke Brazil, Quincy Promes nwere obi abụọ ma onwe ya, na-eche ihe ọ ga-agwa ma ọ bụ jụọ onye so na akụkọ ihe mere eme. Petụtụta Pele dị ka izute mmadụ n'akwụkwọ.
Mgbe anyị na -agụ Quincy Promes 'Bio, anyị na -aghọta na chi bọọlụ ji onyinye okike wee gọzie ya kemgbe ọ bụ nwata. Site n'enyemaka nke nne na nna ya na ndị ezinụlọ ya, ọ lanarịrị oge ọnwụnwa na mkpagbu ọrụ.
N'ụzọ dị mwute, ọ na-ewute ndị fan mara nke ahụ onye ebubo mbu onye Sevilla boro ebubo na ọ na-egbu onye òtù ezinụlọ ma jide ya n'oge imelite Biography. Anyị nwere olile anya na ọ gaghị anọ afọ anọ n'ụlọ mkpọrọ Netherlands.
Daalụ maka ịgụ Eziokwu Akụkọ Quincy. Na LifeBogger, anyị na -agba mbọ maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
Ọ bụrụ na ịchọta ihe na -adịghị mma, biko kerịta ya. Ma ọ bụghị, ka anyị hụ nkọwa gị gbasara onye egwuregwu bọọlụ Dutch. Anyị ga -eji echiche gị kpọrọ ihe ma kwanyere ya ugwu mgbe niile.
Youssef En-Nesyri Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography